chorea रोग (दोस्रो नाम - हन्टिङ्गटन रोग) को स्नायु प्रणाली को गम्भीर रोग बुझाउँछ। : धेरै कारक हुन सक्छ रोग प्रकुपित गरिब रक्त मस्तिष्क को, शक्तिशाली लागूपदार्थ, encephalitis र दुखेको घाँटी, तनाव, atherosclerosis को जटिलताहरू प्राप्त। तर केवल बाह्य कारक यो रोग हुन सक्छ - एक आनुवंशिक predisposition पनि रोग एक कारण हो। यो रोग पुरुष र महिला दुवै गर्न उत्तिकै असर गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ।
यो chorea रोग नै तुरुन्तै प्रकट गर्दैन उल्लेख गर्नुपर्छ, तर लक्षण स्नायु प्रणाली अन्य रोगहरु संग भ्रममा गाह्रो छन्। सामान्यतया, व्यक्ति सार्दा कठिनाई भएको रोग को पहिलो चरण, मांसपेशिहरु सुन्न जस्तो छैन: यो खडा आफ्नो हात उठाउनु गर्न गाह्रो छ। रोगी छ , एक निराश राज्य यसलाई whiny र पिन्चे हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ अनुहार मांसपेशीमा को involuntary संकोचन छ: एक मानिस एक अनुहार बनाउँछ, उसले आफ्नो ओठ आफ्नो ओठको smacked। उत्तेजना को क्षणमा बिस्तारै आफ्नो काखमा हल्लाउँदै सुरु हुन्छ। स्मृति उल्लेखनीय बिग्रन छ। यस पछि चरणमा त्यहाँ एक व्यक्ति paranoid विचार र पछि लाग्न सुरु, पूर्ण वा आंशिक पागलपन छ Obsessions। त्यहाँ आत्महत्या को एक जोखिम छ।
निदान र रोग फारम
बाथ, बाथ र कमजोर: chorea रोग धेरै प्रकारका छन्। बाथ chorea अक्सर तीन र छ वर्ष को उमेर, साथै गर्भवती महिला बीच बच्चाहरु असर गर्छ। chorea को बाथ फारम 25-30 वर्ष उमेर जवान मान्छे मा प्रकट। 60 वर्ष भन्दा बढी वृद्ध गर्न कमजोर chorea विषय। संग निदान हन्टिङ्गटन रोग (फोटो लेख मा प्रस्तुत) डीएनए विश्लेषण र सकारात्मक उत्सर्जन tomography द्वारा। साथै, डाक्टर सेतो रक्त संख्या निर्धारण र गलसुआशोथ संक्रमण पत्ता लागि रगत परीक्षण गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ। एक रक्त परीक्षण उपयुक्त उपचार गर्न मद्दत गर्नेछ।
chorea रोग: उपचार
दुर्भाग्यवश, वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म यो धूर्त रोग पूर्ण उपचार को लागि एक उपचार पाउन व्यवस्थित छैन। उपचार को पाठ्यक्रम प्रकृतिका symptomatic र सहयोग छ। नियम, sedatives नियुक्त antipsychotics। रोग को गंभीर प्रकारका मा निराशा राहत र एक व्यक्ति बढी व्यवस्थित बनाउन tranquilizers निर्धारित हुन सक्छ। chorea गर्दा बाथ रोगी भएको Dispensary गर्न खातामा राख्न राम्रो छ।
रोग को वंशानुगत फारम
एक अभिभावक बिरामी chorea छ भने, त्यसपछि रोग पाउने मौका बच्चा 50% छ। त्यसैले, यो रोग बाट पीडित बच्चाहरु को जन्म योजना सिफारिस गरिएको छैन। पनि गर्ने गर्भावस्था को समयमा यस रोग छन् महिलाहरु, एक स्वस्थ बच्चा भएको मौका जोडले, दोस्रो योजना गर्भावस्था हुँदैन परिणामस्वरूप घट्छ। वंशानुगत पनि स्नायु प्रणाली को रोगहरु, जो chorea समावेश, यो उपचार गर्न धेरै गाह्रो छ, तर चिकित्सकको सिफारिसहरू संग सख्त अनुपालन मा, तपाईं धेरै वर्ष को लागि रोगी जीवन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। स्वस्थ रहन!
Dysgraphia: यो के हो। छोराछोरीको Dysgraphia
शरीरमा रातो स्थलहरू - जो र के हामी "चिह्न" छ?
तल्लो पेट मा आंतों दुखाइ: लक्षण र कारण। को आंत्र क्षेत्रमा दुखाइ लागि आहार
कमेडी "ध्यान, कछुवा": विभिन्न उमेर को अभिनेता, को उद्देश्य - एक
स्वस्थ खाना: दूध संग क्यालोरी चामल porridge
प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ र दार्शनिक। उल्लेखनीय ग्रीक गणितज्ञ र उनीहरूको उपलब्धिहरू